Indoni Cultural SA nonyawo olusha
USANELE noNtombikanina abazobe bemele isizwe samaZulu emcimbini weNdoni ngenyanga ezayo
NOKUBONGWA PHENYANE | November 29, 2019
INSIZWA ezomela isizwe samaZulu ithembisa ukushaya kwasani oluzoma endleleni yayo emcimbini walo nyaka kazime wesintu Indoni Cultural SA.
Umcimbi walo nyaka uzoba se-ICC, eThekwini, ngoDisemba 13.
Insizwa yaseMbali eMgungundlovu uSanele Ndlovu, ithi akusekho muntu ozoma phambi kwayo ekuqopheni umlando wokuthatha isicoco sokuba uMr Indoni Cultural SA wokuqala ngqa.
USanele ungenye yezinsizwa eziyishumi nambili ezigaqele lesi sicoco esiqalayo ukuba khona selokhu kwaqala Indoni ngo-2012.
“Okungichaza kakhulu wukuthi sengifundisekile ngaqonda ngobu-Afrika, ubuntu nokuthi njengensizwa kuwumsebenzi wami ukuvikela isizwe nalabo ababuthaka sengibala abesifazane nezingane,” kuchaza uSanele.
Eqhuba uthe isifungo abasithatha mhlazane bephothula izifundo zeNdoni ukuthi bazovikela bonke abantu besifazane nezingane noma ngabe uyawudla umhlanganiso noma cha.
“Sivula amehlo lesi sifundo kithina zinsizwa ukuthi abesifazane kufanele sibaphathise okweqanda, singavumi ukuthi bahlukunyezwe ngisho sezidlulile lezi zinsuku zokuqwashisa ngalesi simo ezweni,” kusho uSanele.
Ezintombini amathemba esizwe samaZulu asemahlombe kaNtombikanina Mgobhozi, waseMandeni, ofunda eDurban Girls, eThekwini.
Umsunguli nosihlalo weNdoni SA, uDkt Nomcebo Mthembu, uthe intaka ibekelwe amazolo kulo nyaka njengoba izinga lizobe licokeme kunayo yonke eminye iminyaka kanti kuningi okusha okuzokwenzeka.
Okungijabulisa kakhulu wukuthi izinsizwa zeNdoni ziyakuthakasela ukuthi ngeke zisagcina nje ngokuba abakhaphi bezintokazi kepha nazo izinsizwa zisethubeni lokuhlabana ngokulinganayo nezintombi,” kusho uNomcebo.
Ubuye waveza ukuthi owalo nyaka umcimbi uzobanjwa izinsuku ezintathu zilandelana esikhundleni sosuku olulodwa.
“Kuyoqalwa ngemiklomelo emisha Indoni Academic Achievement Awards ngoDisemba 12, bese kuba umcimbi kazime bese umcimbi wokugcina kube owokulanda izigqoko ngokuviliyela kusukwa eKing Dinuzulu Park kuze kuyophelelwa eThekwini City Hall ngoDisemba 14,” kuchaza uNomcebo.
Kulo mcimbi kulindeleke ukuthi kunandise uKhuzani.